एमभी दुगडलाई व्यावसायिक गु्रप बनाउँछु – Rajdhani Daily
एमभी दुगडलाई व्यावसायिक गु्रप बनाउँछु
एमभी दुगड ग्रुप आफ्नो क्षेत्रका ठूला तथा प्रविधिमा लिडर रहेका कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा १४५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि व्यवसाय गर्दै यो गु्रपले अहिले महिन्द्रा, जोन डिलर, रोयल इन्फिल्डलगायतका विभिन्न ठूला कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै अटोमोबाइल्सको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ ।
यो गु्रपले गत फागुनदेखि इटालियन ब्रान्ड पियाजियोका थ्री ह्वीलर गाडीको पनि बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । ३७ वर्षकै कलिलो उमेरमा गु्रपका उपाध्यक्ष विवेक दुगडले ठूलो व्यावसायिक गु्रपलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । परम्परागत पेसालाई मात्रै निरन्तरता नदिई समयअनुसार फरकफरक व्यवसाय गर्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ भएका दुगडसँग राजधानी राष्ट्रिय दैनिककी कमला अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
उपाध्यक्ष, एमभी दुगड ग्रुप
व्यवसायमा कसरी लाग्नुभयो ?
मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि र व्यक्तिगत रुचि पनि व्यवसायमा नै थियो । त्यसैले, व्यवसायमा लागें । हाम्रो पारिवार नै व्यावसायिक भएकाले परिवारमा बुबा, ठूलो बुबालगायत परिवारका सबैजसो सदस्यहरूबीच व्यवसायकै विषयमा बढी जसो छलफल हुने गथ्र्याे । व्यावसायिक पृष्ठभूमिका कारण पनि मलाई व्यवसायमा प्रवेश गर्न मद्दत मिल्यो । साथै म ८ कक्षामा पढ्दा स्कुल छुट्टी भएको मौका पारेर बुबासँग चाइना जाने अवसर पाएको थिएँ । त्यसले पनि मलाई व्यवसायमा लाग्न थप सहयोग ग¥यो । म ८ ,९ कक्षा पढ्दादेखि नै व्यवसायमा लाग्ने भन्ने लगभग निश्चितै भइसकेको थियो ।
तपाईं व्यवसायमा एक सफल व्यक्तित्वका रूपमा रहनुभएको छ, यसको सफलताको कारण के हो ?
कुनै पनि मानिसलाई चाहे त्यो व्यवसाय होस् या अरू कुनै क्षेत्र होस्, सफल हुन सबैभन्दा ठूलो हात परिवारकै हुन्छ र चाहिन्छ । परिवारको साथ र सहयोगबिना कसैले पनि कुनै प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ । मेरो सफलताको श्रेय मेरो परिवारलाई नै जान्छ । र अर्काेतर्फ दुगड ग्रुपसँग सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूको सहयोग र साथले आज हामी सफल भएका छौं । म एक्लैले केही गर्न सक्दिनथेँ । सबै कर्मचारीको एकएक सहयोग र मेहनतका कारण हामी अटोमोइल्स क्षेत्रमा सफल भएका छौं । हामीसँग १ हजारभन्दा बढी स्टाफ छन् । ती हाम्रा परिवार हुन् । उनीहरू हाम्रो जरा हुन् । जराबिना रूख नअडिएजस्तै स्टाफको सहयोगले हामी आज अडिन सकेका छौं, यहाँसम्म पुग्न सफल भएका छौं । यो भयो आन्तरिक कुरा । बाहिरी रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रा उत्पादनका प्रयोगकर्ता छन् । उनीहरू सन्तुष्ट नभैकन पनि हामी सफल भयौं भन्न सकिन्नँ । हामीले प्रयोगकर्तालाई सन्तुष्ट पारेका छौं । त्यसैले, उनीहरूले हाम्रा उत्पादन मन पराएका छन् । त्यो पनि हाम्रो सफलताको अर्काे कारण हो । कुनै पनि कम्पनीको सफलताको मुख्य कारण नै प्रयोगकर्ता(कस्टमर) हो । जब प्रयोगकर्ताले हाम्रा उत्पादन मन पराउँछन्, तब हामी सफल हुन्छौं । यदि प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट छ भने व्यवसाय आफैं बढेर जान्छ । यो मेरो धारणा हो । हामीले कम्पनीको पोलिसी बनाउँदा कस्टमरको इच्छा र चाहनालाई ध्यानमा राखेर बनाउँछौं ।
दुगड ग्रुपअन्तर्गत धेरै व्यवसाय छन्, तर अटो मोबाइल्स र हाइड्रोपावरमा किन बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ ?
तपाईंले भने जस्तै दुगड गु्रपअन्तर्गत धेरै व्यवसायी छन् । तर हामीले अटोमोबाइल र हाइड्रोपावरलाई नै बढी फोकस गरेका छौं । किनभने हामीले बेला बेलामा बिजनेस स्ट्राटेजी चेन्ज गर्छौं । हामीले कहिल्यै पनि परम्परागत व्यवसायलाई यो मेरा बाबु बाजेले गरेको व्यवसाय हो भनेर अगाडि बढाएनौं । त्यसलाई चेन्ज गरेर बेला बेलामा समयको मागअनुसार नयाँनयाँ व्यवसायमा हात हाल्यौं । हाम्रो गु्रपको पहिलेको मुख्य व्यवसाय भनेको कृषि क्षेत्रमा थियो । हामीले त्यसैलाई मात्रै प्राथमिकता दिएनौं ।
भावी पिँढीहरूले पनि सजिलै अगाडि बढाउन सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अटोमोबाइल्स तथा हाइड्रोपावरलगायतका क्षेत्रमा हात हालेका हौं । र हामी सफल पनि छौं । हामी १९७२ देखि नै हामी अटोमोबाइलको क्षेत्रमा छौं । मलाई यसको गर्व पनि छ । हामीले अटोमोबाइलको क्षेत्रमा केही त योगदान गर्न सक्यौं । र हामीले हाइड्रोपावरमा फोकस गर्नुको कारण हाम्रो देशमा यो क्षेत्रमा नेचुरल बेनिफिट छ । हाम्रो देशको पानी खेर गइरहेको छ । त्यो पानीलाई सदुपयोग गरेर हामी फाइदा लिन सक्छौं भने किन नगर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यो क्षेत्रमा अनलिमिटेड सोर्स छ भनेर हामीले यसलाई रोजेका हौं । पछि हामीले यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौं ।
हाम्रो ग्रुप सफल हुनुमा परिवार स्टाफ सबैको साथ छ
हाइड्रोपावर र अटोमोबाइलमा बढी फोकस रहेको छ
२ पांग्रेदेखि १६ पांग्रे सेगमेन्टसम्म लगानी
अटोमोबाइल विषय निकै राम्रो छ
देशभरि हाम्रो गु्रपको नेटवर्क फैलिएको छ
यस ग्रुपले अरू कुन–कुन ग्रुपसँग साझेदारी गरेको छ ?
साझेदारीको कुरा गर्दा महिन्द्रासँग काम गरेको आज २६ वर्ष भयो । त्यस्तै, रोयल इन्फिल्ड, हाइभालगायतका विभिन्न ग्रुपसँगको साझेदारी छ । त्यसका अलावा हामीले बैंकिङ तथा फाइनान्सिङमा पनि प्रमोट गरेका छौं । सनराइज बैंक, सानीमा जनरल इन्स्योरेन्सको पनि प्रमोट गरेका छौं । यी विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायमा हामीले अरू व्यावसायिक घरानासँग मिलेर अगाडि बढेका छौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको म चियरम्यान पनि हुँ । यसरी विभिन्न क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका छौं ।
अटोमोबाइल्स व्यवसायको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
विगत चार÷पाँच वर्ष यता अटोमोबाइल्सको ग्रोथ धेरै राम्रो देखिएको छ । देशका हरेक सडकमा धेरै गाडीहरू गुडिरहेका छन् । यसले बजारको भोलुम बढेको देखाउँछ । त्यो त भयो कन्जुमर रिलेटेड अटोमोबाइल । निर्माणसम्बन्धी इक्विपमेन्ट यी हाम्रो देश निमार्णका लागि अति आवश्यक छन् । र अर्काे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । हाम्रो देशमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टको क्षेत्रमा आज पनि धेरै कमजोरीहरू छन् । पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन् । सरकारले हालै मात्रै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको छ । मलाई लाग्छ, यसपछि पब्लिक ट्रान्सपोर्टको क्षेत्रमा अझै विकास हुन्छ । व्यवसाय बढ्छ । बढी गाडीहरू भएपछि पब्लिकलाई पनि यात्रा गर्न अलि सहज हुन्छ । अहिले पब्लिक टान्सपोर्टको डिमान्डभन्दा सप्लाई कम छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा धेरै राम्रो ग्रोथ आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
अटोमोबाइल्सका कुन–कुन उत्पादन छन्, तपाईंको ग्रुपमा ?
दुई चक्केदेखि लिएर १६ चक्केसम्म सबै सेगमेन्टमा हाम्रो उपस्थिति छ । आज हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौं कि हामी दोस्रो स्थानमा छौं भनेर । महिन्द्रामा हामी पहिलो छौं । सबै सेगमेन्टको कुरा गर्ने हो भने हामी दोस्रो पोजिसनमा छौं । साथै हाम्रो गु्रपको नेटवर्क हामीले देशैभरि पु¥याइसकेका छौं । आगामी दिनमा अटो मोबाइलको क्षेत्रमा अझै राम्रो गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं ।
यो ग्रुपका देशभरि कतिवटा शाखा कार्यालय छन् ?
हाम्रा यस गु्रपका ३६ वटा छन् ।
दुगडका उत्पादनदेखि प्रयोगकर्ता कत्तिको सन्तुष्ट छन् ?
हाम्रा प्रायोगकर्ताहरू निकै सन्तुष्ट पाएका छौं । हाम्रा उत्पादन प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट भएर त हामी आज सफल हुन सकेका छौं ।
मैले अघि नै भनिसकें कि अरू व्यवसायको तुलनामा अटोमोबाइल र हाइड्रोपावरमा हामी अलि बढी केन्द्रित छौं । त्यस क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने योजना छ । साथै यस गु्रपलाई पहिलो नम्बरको व्यावसायिक गु्रप बनाउने योजनामा हामी लागेका छौं ।